Padmaavat – Page 2 – Filimside.net
Padmaavat oo ku biiray liiska 10-ka filim todobaadka 6-aad ganacsiga ugu badan sameeyeen
March 14, 2018 Zakarie Abdi
Filimka weyn Padmaavat wuxuu noqday Blockbuster sidoo kalena mashruucaan wuxuu ku biiray liiska 10-ka filim ee lacagaha ugu badan todobaadka lixaad soo xareeyeen. Deepika Padukone, Shahid Kapoor iyo Ranveer Singh filimkooda Padmaavat darajo sare ayuu […]
Padmaavat oo weli ganacsi adag gudaha Hindiya ka sameenayo waa Hit hirgalay
March 6, 2018 Zakarie Abdi
Deepika Padukone, Ranveer Singh iyo Shahid Kapoor filimkooda Padmaavat ayaa noqday Classic Hit madaama uu tiyaatarada ka dagi weesan yahay sidoo kalena weli ganacsi adag sameenayo ayadoo todobaad walbo filimo cusub masraxa lasoo saarayo. Padmaavat […]
Deepika Padukone, Shahid Kapoor iyo Ranveer Singh filimkooda Padmaavat ayaa keenay 6 Crore (Trade Figure) todobaadkiisa shanaad waana ganacsi aad u sareeyo asigoo noqday filimka lixaad ee taariikh ahaan lacagaha ugu badan todobaadkiisa shanaad soo xareeyo. Padmaavat […]
Padmaavat oo kaalinta 7-aad ka galay 15-ka filim ee lacagaha ugu badan soo xareeyeen dibad iyo dal (Worldwide Gross)
February 27, 2018 Zakarie Abdi
Filimka Padmaavat ayaa ganacsigiisa haatan maraayo 525 Crore isku darka gudaha Hindiya iyo daafaha caalamka ilaaa shalay (Isniin) ganacsigiisa ayay xogtaan ku xeen daaban tahay sida shabakada Boxoffice India soo daabacday. Padmaavat ayaa gudaha Hindiya kasoo xareeyay 350 […]
Ganacsi sare u kac, gaabis iyo dhex dhexaad ah aye wada sameyeen filmada Bollywoodka ee kala ah Padmaavat, Padman iyo Aiyaary kuwaaso wali tiyaatarada saaran. Padmaavat ayaa ganacsi wacan sameyay todobaadkisa shanaad sedexda maalmod ee […]
Sonam Kapoor “Swara Xaq Ayee U Leedahay Inee Fikirka Ku Aadan Padmaavat Ka Hadasho”
Atirishada Sonam Kapoor ayaa noqotay atirishadii kowaad ee difaacdo Swara Bhaskar taaso horey muran dhexda oga gashay kadib markii ay wax ka sheegtay Bhansali iyo filmkiisa Padmaavat ayadoo dhaliishay. Hadaba Swara waxaa ku kaceen kooxda […]
Rasm: filimka Padmaavat iyo mudo afar todobaad ah ganacsiga uu gudaha Hindiya ka sameeyay
Filimka weyn Padmaavat oo ay hogaamiyaal ka yihiin Deepika Padukone, Shahid Kapoor iyo Ranveer Singh ayaa ganacsi heer sare ah sameeyay todobaadkiisa afaraad wuxuuna keenay 13.25 Crore (Trade Figure) waana filimka 4-aad ee ganacsiga ugu wacan sameeyo […]